Vaovao - Inona no tokony hojerentsika rehefa mifidy fanaka eny ivelany
Inona no tokony hojerentsika rehefa mifidy fanaka ivelany
Araka ny fombanao haingo
Na dia ampiasaina amin'ny ety ivelany aza ny fanaka, nefa mila mifanentana amin'ny fomba fanaingoana ankapobeny mba hisafidianana. Raha te-hametraka fanaka ivelan'ny trano eo an-davarangana na patio ianao, dia tokony hodinihinao hoe iza avy no haingo anao.satria nataony an'ny zaridaina io, tokony hifidy fanaka sahaza ho an'ny zaridaina izy io. Similarly, tokony hisafidy fanaka fomba maoderina izy io rahoviana an'ny lamaody maoderina io,
Diniho ny fampiasana fanaka ivelany
Tsy mitovy ny fampiasana ny lavarangana na patio amin'ny rehetra. Rehefa misafidy dia tokony jerena aloha ny fampiasanao ny lavarangana na patio. ahon tranga izany tianao ny mankafy ny fotoana fialamboly mangina, afaka misafidy fanaka zaridaina fialamboly ianao. Raha tianao ny misakafo dia azonao atao ny mifidy andiana fisakafoana.
Diniho ny haben'ny fanaka ivelany
Ny safidin'ny fanaka ety ivelany dia miankina amin'ny faritra misy ny lavarangana misy antsika, patio na faritra ivelany hafa. Rehefa dinihina tokoa, ny lavarangana dia mitazona toerana voafetra ao an-tranonay ihany.Io dia ho mandany toerana be loatra rahoviana lehibe loatra ny fanaka SY mijery skimpy rehefa kely loatra. Noho izany dia tokony handrefesana marimarina isika alohan'ny hisafidianantsika, na hisafidy fanaka an-kalamanjana azo stackable na azo alefa, mba hitsitsiana toerana malalaka kokoa